प्रिन्ट संस्करण - लोकतन्त्रमा नसुहाउँदो काम - पाठक मञ्च - कान्तिपुर समाचार
भाद्र २९, २०७४-काङ्ग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ५४ जनाको जम्बो मन्त्रीमण्डल बनाएका छन् । अब के.पी. ओलीले जस्तो ६ वटा उपप्रधानमन्त्री पनि राख्ने हो भने पूर्णरूपमा ओलीपथ हुनेछ । अनि ओलीकै जस्तो कालोबजारी र महँगीलाई पनि बढावा दिने हो भने ओलीको कार्यले पूर्णता पाउनेछ । देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा सकेसम्म सानो र छरितो मन्त्रीमण्डल बनाउने सबैले आशा राखेका थिए । तर उनले आम मानिसको आशालाई पटक्कै ध्यान दिएनन् । ओली, प्रचण्ड र देउवा तीनैजनाले मण्डले लिएर सरकार चलाउने हर्कत गरे । यी नेताहरूको किन यति ठूलो मण्डले मोह ? के यी पञ्चहरूले नेपालमा लोकतन्त्र ल्याएका हुन् ? भनौं भने लोकतन्त्र ल्याउन लडेका मानिसको अझै बेहालत छ । कैयौं अङ्गभङ्ग छन् भने कैयौंको अझै उपचार हुन सकिरहेको छैन । अझ हाम्रा प्रधानमन्त्री देउवाकै पनि यिनै पञ्चहरूले जिब्रोमा करेन्ट लगाइदिएर जिन्दगीभर बोल्न गार्‍हो बनाइदिएको उनले भुसुक्कै बिर्सेछन् कि ?